Qoqqoodama Oromoo – OROMP4 Studio
Aadaafi duudhaa gabbataan hawaasa tokkoo osoo irraanfatamanii hinbadiin tooftaalee adda addaatiin dhalootaa dhalootatti akka darbu gochuun barbaachisaadha. Tooftaalee kanneen keessaa tokko duudhicha ijoollee ofii barsiisuudha. Duudhaaleen kunniinis kanneen akka durdurii ykn oduu durii, hiibboo, mammaaksaafi kkf dha.
Duudhaa gabbataa ummanni Oromoo qabu keessaa tokko afoola. Afoola keessaa ammoo durduriin adda durummaan kan eeramuudha. Durduriin ykn oduun durii Oromoo biratti bal’inaan beekama. Durduriin yaroo baay’ee kan himamu ijoolleedhaafi. Ijoolleen jiruufi jireenya keessatti wantoota isaan mudachuu malan ilaalchisee hubannaa akka argataniifi akka qarooman gochuu keessatti dur druriin shoora guddaa taphata.
Kana malees ijoolleen waa’ee aadaa, amantiifi seenaa hawaasasaanii, akkasumas waa’ee bineensotaa, mukeeniifi dimshaashumatti uumamaafi qunnamtii uumama waliin qabaachiun isaanirraa eegamu dur durii keessatti akka ilaalaniifi akka baratan ni taasifamu.
Walumaagalatti durduriin sirna ijoolleen bashannanaa duudhaaleesaanii ittiin baratan akka ta’e hunduu kan irratti waliigaluudha. Oromoonis haala kanaan fayyadamaa aadaafi duudhaasaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa akka dhufe kan seenaafi duudhaa Oromoo beeku hundi ni hubata.
Kanaafuu aadaa miidhagaan kun dagatamee akka hinhafne kan dhimmi isaan ilaalu hundi shoorasaa taphachuu qaba jachaa dur duriiwwan Oromoo biratti bal’inaan beekaman keessaa muraasasaa kan Waldaan Malkaa jedhamu qopheesseefi intarneetiirraa arganne akka armaan gadiitti isin dubbisiisna.
Leencaafi waraabessatu waliin jiraatu turan. Leenci sangaa qaba. Waraabess immoo sa’a qaba. Isaanis dabareedhaan walii tiksaa turan. Guyyaa tokko, gaafa dabaree leencaa sa’aani waraabessaa dhalte. Leenci waatii dhalatte fudhachuu barbaadee dil’uu sa’attii fuudhee qaama sangaasaatti suuqee waraabessaan, “Kunoo sangaa kootu dhale” jedheen. Sana booda wallolanii bineensota jaarsummaa baafatanii bineensonni hunduu dhufanii qamaleen hafnaan guyyaa biraatti beellamatan.
Guyyaa beellamaa kanas qamuun akkuma amalashee turtee dhufte. Oggaa isheen dhuftu bineensonni kuun odaa jalatti walgahanii turan. Leencis qamaleedhaan akkana jadheen, “Jaarsummaa koo tuffatteeti moo maaliif turte” jedheeni. Qamuunis lakki gooftaa tuffadhee osoo hinta’in lafa tarsa’ee (baqaqee) tokko otoon suphuun ture jetteen. Leencichis, “Lafti ni suphamaa maaliif sobda”? jennaaniin isheenis deebistee, “Sangaan ni dhalaa”? jettee muka kortee jedhama.
Jaldeessatu haadha manaa leencaa jaallatee ani bareedaan kun sijaalladhe jedhee haadha manaa leencaatti hime. Isheenis tole jetteenii galtee, “Osoo ati jirtuu jaldu tortoraan sin jaaladha naan jedhe” jettee leencootti himti. Obbo leencoonis mala malee haadha manaasaatiin akkas jedheen. “Guyyaa tokko inni hinjiru jedhiitii marqaa marqii waami. Ani immoo baaxii manaarran taa’aa jedheen”. Isheenis marqaa marqitee jalduu waamte. Innis dhufee marqaa erga nyaatee booda, “Ana moo obbo leencoo keetu irra bareeda” jedhee haadha manaa leencaa gaafate. Isheenis situ bareeda jetteen. Booda osoo obbo leencoon amma sitti dhufee maal goota? jettee gaafatte. Innis, “Hinsodaadhu” jedheen.
Yeroo kana obbo leencoon baaxiirraa gadi bu’ee jalduudhaan, maal asii goota jedhee gaafannaan, “Rakkadheen kadhaa dhufe” jedheen. Ittaansee obbo leencoon funyaan kee kana maaltu akkana godhe? jedheen. Jalduunis ganamaafi galgala waaqa osoon kadhuun akkas ta’e jedheen. Leencoon deebisee ‘hudduu’ kee kana hoo maaltu akkana godhe? jedhee gaafate. Ganamaafi galgala mukarran foqoqa, isaatu akkas nagodhe. Harka kee kana hoo maaliif akkas ta’e? jedhee gaafannaan, ganama rirma galgala ammoo ija mukaa funaanuutu na luqqise jedheen jedhamaa.
Bara durii sardiidaan ganamaan kaatee otoo nyaatashee barbaaddachaa jirtuu lukkuun warra tokkoos heddummatanii otoo nyaatasaanii barbaaddachaa jiranii kormaan hindaanqoo tokko iyye. Sardiidaan sagalee kana dhageessee sagalee keetu baay’ee natti tolee mee irra deebi’ii naaf jedhi jetteen. Kormaan lukkuus lukaan lafatti ejjetee ijasaa lamaan dunuunfatee osoo iyyuu sardiidaan utaaltee morma kormaa lukkuu qabatte.
Hindaanqonni kuun baqatanii gara manaatti deebi’an. Sardiidaan kormaa lukkuu fudhattee osoo fiigaa jirtuu kormaan lukkuu sardiidaadhaan akkas jedhe, “Osoo ati lallabdee lukkuulee hedduun deebi’anii waan dhufaniif iyyi” jedheen. Sardiidaanis tole jattee yeroo iyyitu kormaan hindaanqoo sardiida harkaa bahee muka irra bahe jedhama.
Abbaa manaafi haadha manaa gowwaatu biyya tokko keessa jiraataa turan. Guyyaa tokko karaa deemuuf galaa qopheeffataniiru. Galaansaaniis bassoodha. Osuma deemanii bishaan bassoo ittiin basseeffatan barbaacha gara lagaatti goran. Laga gahanii bassoo isaanii hiikanii bishaan guddaarratti firfirsan. Yeroonsaa ganna, yaroo lagni guutu waan ta’eef bassoosaanii jalaa fudhatee yemmuu deemu haati manaa bassicha qabuuf bishaan keessa lixxee deebi’uu dadhabde.
Abbaan manaas taa’ee ishee eegaa turee isheen deebi’uu didnaan, “Maalif bishaan keessaa hinbaatu jedhee” dhakaa itti darbannaan dhiigni ol faca’e. Yeroo kana abbaan manaa gowwaan sun, “Ana kophaatti dhiistee kophaashee bassoo barbareedhaan nyaattii” jedhee innis bishaanicha keessa seenee lubbuun warra lamaanii bishaaniin badde jedhama.
Guyyaa tokko qocaan beela’ee osoo karaa deemuu sinbirroota waamicha dhaquuf qophaa’anitti dhufe. Innis sinbirrootaa eessa deemaa jirtu? jedheen. Isaanis bakka dhaquuf jedhan ittihiman. Qocaanis maal ta’aree yoo na fudhattanii deemtan jedheen. Rakkoo hinqabu. Koochoo tokko tokko siif kenninee nu waliin deemta jedhanii akkuma jedhan kennaniifii osoo balali’aa jiranii maqaan kee eenyu jedhanii gaafatan. Innis maqaan koo ‘hunduma keessanii’ jedhee deebisef.
Erga bakka waamichaa gahanii booda ani waanan dubbii beekuuf isiniifin dubbadha jedheenii tole jedhaniin. Innis erga dubbatee booda dhangaan kun eenyuuf qophaa’e? jedhee gaafate. Isaanis hunduma keessaniif jennaan qocaanis dhageessanii maqaan koos hunduma keessanii. Dhangaan kun kan qophaa’e hunduma keessaniif waan ta’eef dhangaan kun anaaf qophaa’e jedhee sinbirroota irraa ari’atee qofaasaa nyaate.
Haata’u jedhanii sinbirroonni gara manasaanii galuuf koochoosaanii irraa buqqifatanii yeroo ka’an haadha manaasaatti akka ergaa himaniifiif akkas jedhee itti dhaammate, “Yemmuun balali’aa dhufu waan laafaa balbalarra kiyya dura naa hafi, yeroon achi gahun gadiitti of dhiisaa jedhe jedhaatii itti naaf himaa” jedhee itti himate. Isaanis ergaasaa jijjiiranii, “Waan qara qabu kan akka eeboofi aalbeefaa balbalatti gadi naaf baasii na eegi Isheenis qopheessitee eegdee irratti of gatte. Isaanis, “Cubbuun abbuma miiti” jedhanii mammaakan jedhama.
Leencaafi dhala namaa:
Bara durii leenci tokko osoo bosona keessa deemuu daa’ima saamtonni haadhaafi abbaa irraa ajjeesan tokko argatee gara mana jireenyaasaatti fudhatee gale. Sana booda lafeedhuma ofii nyaatuufi lafeefi waan dhugamu obaasee guddise. Mucaan sun erga guddatee booda dhala namaatti maxxanuu jalqabe.
Adeemsuma kanaan namoota wajjin yaada waljijjiiruu jalqabe. Achumaan, “Silaa ati ilmoo namaati, akkamitti bineensa bosonaa waliin jiraachuu dandeesse?” jedhanii gaafannaan anaaf abbaa kooti; reeffa abbaa koofi haadha koo jidduudhaa kaasee na fudhatee galee kan naguddise, abbaan koo kanan akka lubbuu kootti jaaladhu isuma. Kanaafuu, anis gara abbaa koottan galaa isinis nagaan naa bulaa jedheenii gara mana ‘abbaasaatti’ gale.
Mucichi guyyaa sana yaa galuu malee hanguma namaan walargu waa’ee leenca wajjin jiraachuusaarratti gaafiin dhiyaataaf. Deebiinsaas sanuma ta’ee osoo jiruu guyyaa tokko galgala warri ati yeroo hunda gara abbaa koottan gala jettee leencuma kana wajjin jiraachuuf deemta. Hanga ammaatti waan badaa tokkllee irratti argitee hinbeektuu? jedhanii gaafannaan waan gaaffiinsaanii itti baay’ateef deebii tokko kennuuf dirqame. Kunis fedhii namootaa guutuudhaaf jecha, yeroo na hammatee rafu bobaansaa natti xiraaya malee waan badaa tokkoyyuu irratti argee hinbeeku jedheenii; jedhaa nagaan bulaa, ani nan galaa jedhee biraa bahe.
Yeroo sanatti alli waan dukkanaa’eef namni hinargu, leencichi mana jala dhaabbatee dhageeffachaa ture. Erga mucichi bahee booda dura kaatee manatti galee eege. Erga mucaan galee, “Maal ilma koo eessa turtee dhufte? jedhee gaafate.
Mucaanis, “Asumaa osoon sanyii mukaa funaannadhuu natti galgalaaye,” jedheen. Achumaan, leencichis bakka mucaan ture waan beekuuf akkasumas waan inni jedhe hundumaa waan dhagaheef aaree eeboo manaa qabu fuudhee, “hoodhu na waraani!” jedhee mucaatti kenne. Achumaan mucaanis reeffa haadhaafi abbaa kootii gidduudhaa na kaastee naguddiftee ammaan na geessee. Aani ofan waraana malee akkamittan si waraana? jedheenii deebiseef. Achumaan mucaanis ajaja dirqamaa waan itti ta’eef, leencicha waraane. Leencichis erga waraanamee booda erga na waraantee hanga madaan koo fayyutti, wanta argatte mara natti funaanii na wal’aani jedheen.
Mucaanis tole jedhee, waanuma argate funaanee hanga madaansaa fayyutti wal’aane. Leencichis erga madaansaa fayyee booda ofitti waamee; ilaali, madaan ati eeboodhaan nawaraante fayye. Jechi ati gaafa sana mana fira kee teessee jette sun garaa kootii hinbaane. Ani guddisee si hinnyaadhu. Atis gara fira keetti. Anis bobaa koo xiraa’aa wajjin gara bosona kootii jedheenii gaggeesse jedhama.
Kanas ilaali: Qoqqoodama Oromoo
Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda
baha. Bakka dhiha baha irra eegalee hanga
bahaatti tuutni kun:
Ummani Wallaggaa ummata naannawa
dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa
Oromoo Maccaa – Laga Dhedheessaa fi
Laga Oomoo gidduu, kibba Laga Gibee jiraatu.
Oromoo Tuulamaa – Handhuura Oromiyaa
naannoo Finfinnee jiraatu;
Oromoo Walloo – gara Kaabaa naannoo
Amaaraa godina addaa Oromiyaa , naannoo
Hara Ashangee, jiraatu; Oromoo Raayyaa fi
Oromoo Yajjuu jedhamu
Oromoo Ituu , nannoo Oromiyaa keessa Laga
Hawaas fi magaalaa Dirre Dhawaa jiraatu;
Oromoo Anniyyaa – kibba warra Ituu fi dhiha
Laga Erer jiraatu;
Ala Oromoo – magaalaa Harar fi Laga Erer
dhihatti, warra Ituu fi Anniyyaa gidduu jiraatu;
Oromoo Nole – magaalaa Dirree Dhawaa
bahatti kaaba magaalaa Harar;
Oromoo Baabbilee – qaama Oromoo bahaa
yoo ta’an, baha Laga Erer fi kibba Oromoo
Oromoo Jaarsoo – Harargee Bahaa gara
Oromoo Arsii – godinaalee Arsii , Baalee fi
haga tokko Shawaa Bahaa keessa jiraatu.
Oromoo Booranaa – Kibba Oromiyaa fi
kaaba Keeniyaa jiraatu.
Warra Qaalluu – Laga Hawaas fi magaalaa
Dirre Dhawaa gidduu jiraatu.
Oromoo Gujii – qaama Oromoo Kibba
jiraatuu yoo ta’an, ollaa Oromoo Booranaa
Shariifaa Laga Hawaas fi magaalaa Dirre
Dhawaa gidduu jiraatu.
~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo
hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha!
~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufittiJechoota Hayyootaa!!!
~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti
beekee, irraa sirraa’eedha!
~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee,
kopheen qixxeessuuf luka hin muran!
~ Moo’uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin
taane, jijjiiramas agarsiisuudha!
~ Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo
hin taane, barumsi nama keessa darbuudha!
~ Barumsa barattee yoo qoramtu, jireenya immoo
~ Nama si sobu wajjiin gammaddee kolfuu, irra
nama dhugaa sitti himu wajjiin gadditee boohuu
~ Namni carraa gaarii qabu osoo bishaan
galaana keessatti darbaniiyyuu, Qurxummii
afanitti qabatee keessaa baha!
~ Obsi guddaan dhagaa yoo affeelu, aariin
xinnoon bishaan bobeessiti!
~ Yeroo tokko tokko gammachuun guyyaa tokkoo,
gadda waggaa tokkootti jijjiirama!
~ Nama kabajuun mallattoo sodaa ykn
lugnummaa osoo hin taane, bilchina sammuu fi
dandeettii fageessanii yaaduuti!
~ Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaaliidhaan
shaakala ati taasiftu keessatti kufaatiiwwan si
muudatan kufaatii osoo hin taane, akeektuu
galma gahiinsa yaalii keetiiti!
~ Addunyaa kana irratti Harreen akka namaatti
yaadu jiraatuu baatus, namni akka harreetti
yaadu hin dhabamu!
~ Akka addunyaatti yaadii, akka naannootti
~ Dhalli namaa wanta haara argannoodhaan yoo
uumu (kalaqu) kan nama gammachiisu yoo ta’u,
garuu ufii isaatii uumamuu (kalaqamuu) yoo
irraaffatu immoo kan nama gaddisiisuudha!
~ Kan nama qaanessu ba’aa guddaa sammuu
irratti baachuu osoo hin taane, sammuu hin
~ Yoo rakkoon wahii si muudate rakkoo si
muudate saniif yaaduu osoo hin taane, akkaataa
rakkoo si muudate san keessaa itti baatu yaaduu
~ Osoo dhugaan kophee hin godhatin, dharti
~ Mucucaattee dugdaan yoo kufte balleessaan
kee ta’uu kan hin dandeenye yoo ta’u,
balleessaan kee ta’uu kan danda’u kuftee yoo
¤ Wal beekuu irra, walii beekuu wayya!
~ Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin
~ Sareen yeroo hunda duttu akka hin birmanneef
~ Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane,
wanta dukkana keessa jiruudha!
~ Irra caalatti kan dinqisiifatamuu qabu namoota
addeessa irra qophatan osoo hin taane, namoota
akkaataa isan addeessa irra ittiin qophatan
~ Addunyaan tun sirraa waan tokko eegdi waan
ta’eef, waan gaarii tokko hojjadhu!
~ Kaayyoo ufii galmaan gahachuuf dhama’uun
har’aaf dhandhamni isaa kuraawaadha malee,
boru firii fi dhandhamni isaa mi’aawaadha!
~ Nama shakkitu hin mindeessin, yoo mindeessite
~ Wanti calaqqisu hundi, warqii sitti hin
~ Jiraachuuf nyaadhu malee, nyaachuuf hin
~ Waggatti jiruu dabali malee, jiruutti waggaa hin
~ Riqicha muka tokkoo irra osoo hin bahin dura,
gorora takka liqimsi!
~ Balbalti carraa takka yoo si jalaa cufamte yoo
ati abdii kutuu dhabde, tan biraa siif banamti!
~ Gatii yeroo beekuu yoo barbaadde, atileetii
maaykiroo sekondii tokkoof moo’amee badhaasa
meedaaliyaa warqii dhabe gaafadhu!
~ Bu’aa qabxii baruu yoo feete, barataa qabxii
0.5niif qormaata kufe haasofsiisi!
~ Aangoo qubaan si filaniin uf hin tuulin, qubaan
irraa si buusaniitii!
~ Beekkumsa qabduun hin boonin, kan si caala
beeku heddutu jiraatii!
~ Namni an beekaadhaa ufiin jedhu, wallaalaan
akka isaa hin jiru!
~ Hanga dandeessetti bara baraan jireenya kee
jijjiiri malee, akka barri wal sitti hin jijjiirre!
~ Barcumaa fi kabaja abbatu uf jalaan deema!
~ Bara rakkoo bishaantu muka namatti kora!
~ Waan garaan namaa baatu, Wadalli Harree hin
~ Lafa fardi sangaan hin jirre, maxaanatu itti
~ Kan ati jechuu qabdu biyyi too maal naa goote
jechuu osoo hin taane, an biyya kootiif maal
godhe jechuu qabda!
~ Baay’ee haasahuu irra, baay’ee dhageeffachuu
~ Hojii guddaa karoorfame irra, hojii xinnoo
~ Bara jireenyaa kee keessatti yeroo dheeraa
taa’umsaan dabarsitu irra, yeroo gabaabduu
hojiin dabarsitutu bu’aa guddaa siif qaba!
~ Namni sabbata godhatanii mudhiitti hidhatan,
Bofa namatti ta’ee nama hidda!
~ Akkuma jaalalli jiru jibbis jira waan ta’eef,
icciitii yeroo jaalalaa haasoftan yeroo jibbaa
~ Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin
~ Jaalalli dhugaa furtuu jireenyati!
~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa fi gaaddisa
~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef, guulli harkisa
lafaa itti hin gaafatamu!
~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala
~ Yoo nama taate fedhii keetiif osoo hin taane,
kaayyoo keetiif dursa kenni!
* Waan dubbiftaniif, galata guddaa qabdu!!!
# GALATOOMAA !!!